ဆယ်တန်း မဖြေနိုင်လို့ မအောင်တာနဲ့ ဘ၀ကြီးစုတ်ပြတ်သွားပြီလို့ ထင်တဲ့ သူတွေ ဖတ်ကြည့်ပါ - Tameelay
ချစ်သူဖြစ်နေရင်တောင် ဒါမျိုးလာလုပ်ရင် ဥပဒေနဲ့ငြိစွန်းလို့ ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်နိုင်ပါတယ်…
ငွေကြေးဖြင့် တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ အရာ ၅ ခု
🔴မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ရည်ရွယ်ရေးသားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဆယ်တန်းမှာ ကျွန်တော့်လိုပဲ ရိုးရိုးသမာရိုးကျသာဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား/သူများ စိတ်အားတက်ကြွစေရန်အလို့ငှာ ဒီစာကိုရေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဆယ်တန်းမှာ မအောင်လို့ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ရိုးရိုးအောင်ရင် ဖြစ်စေ ဘ၀ကြီးကသုံးစားလို့မရတော့ဘူးလို့ ထင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရွှေ မြန်မာတွေရဲ့အမြင်ကို ပြောင်းစေချင်လို့ပါ။ အထူးသဖြင့် ဒီဆောင်းပါးကို ဆရာ၊ ဆရာမတွေ၊ လက်ရှိ မိဘ ဖြစ်နေသူတွေနဲ့ မိဘဖြစ်မယ့်သူ ၊ဘ၀ကိုတိုးတက်အောင်မြင်လိုသူ တွေ ဖတ်သင့်ပါတယ်။
🔴ကျွန်တော် ဆယ်တန်းကို Bio တွဲနဲ့ ၂၀၀၅ခုနှစ်မှာ ဖြေဆိုအောင်မြင်တုန်းက အမှတ် ၄၀ကျော် ၂ဘာသာနဲ့ ကျန်တာ ၅၀ကျော်နဲ့ စုစုပေါင်း ရမှတ် ၃၂၆မှတ် ဖြစ်ပါတယ်။ (အောက်မှာ ဆယ်တန်း အမှတ်စာရင်းတင်ပေးထားပါတယ်။) အဲဒီလို အမှတ်မကောင်းခြင်းတွေကြောင့်ပဲ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ကျွန်တော် လိုချင်တာတွေနဲ့ ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ Company ၁ခုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ၊ နောက်တစ်ခုမှာ Director အနေနဲ့ ပါထားတဲ့အပြင် ၊ Training Center ၅ခု ကိုလည်း ကိုယ်ပိုင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး တခြားသော လုပ်ငန်း ၃ခုမှာလည်း Share ၀င်ထားပါသေးတယ်။ နောက်ထပ်လည်း ထပ်မံချဲ့ထွင်မယ့်အရာတွေ စီစဉ်ထားပါသေးတယ်။ အော်.. မေ့လို့ ချစ်လှစွာသော ဇနီးနဲ့ သားလေးတစ်ယောက်လည်း ပိုင်ထားပါသေးတယ် 🙂
🔴ကျွန်တော် အခု အရမ်းမချမ်းသာပါဘူး။ သို့သော် အခု အသက်၃၀မပြည့်ခင်အချိန်မှာပဲ ငွေကြေးအတွက် သိပ်ပူစရာမလိုတဲ့ ဘ၀ကို ရရှိနိုင်ခဲ့ပြီ။ နောက်ပြီး မသုံး မဖြုန်းပဲနေမယ်ဆိုရင် အေးဆေး တဘ၀လုံးစာ ထိုင်စားလို့ရနိုင်တဲ့ ၀င်ငွေရှိခဲ့ပြီ။ ဒါတွေက ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့မှုနဲ့အတူ မိဘတွေရဲ့ အားပေးနှစ်သိမ့် လမ်းပြမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
🔴ပြောရမယ်ဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂နှစ်ကျော်ကာလ အခုလိုအချိန်မှာ ကျွန်တော် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကို အသည်းအသန်ဖြေဆိုခဲ့ရတဲ့ကာလပေါ့။ အသည်းအသန်ဆိုလို့ အထင်ကြီးမသွားကြပါနဲ့အုံး…. သူများလို ဂုဏ်ထူးတွေပါဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရိုးရိုးလေး အောင်ဖို့ မနည်းကြိုးစားခဲ့ရတဲ့အချိန်ပေါ့။
🔴မှတ်မှတ်ရရ ဆယ်တန်းဖြေခါနီး ၂လ/၃လ လောက်အလိုမှာ ညဘက် လုံးဝ အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါတစ်ခုရခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ အဲဒီရောဂါရလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာအသိဆုံးပါ။ ဆယ်တန်းဖြေခါနီးနေပြီ ဘာစာတစ်လုံးမှမရလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ အဖေနဲ့အမေတိုင်ပင်ပြီး ရန်ကုန်က ဆရာဝန်တွေဆီကို ဆေးခန်းသွားပြတာ ဖြေခါနီးမှပဲ ပြန်ရောက်လာတယ်။ (မှတ်ချက်။ ကျွန်တော်က ဆယ်တန်းအထိ ပဲခူးတိုင်း ၊ မင်းလှမှာ ကျောင်တက်ခဲ့တာပါ။)
🔴ဖြေခါနီးမှနယ်ကို ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာတယ်။ နောက်ဆုံးဆယ်တန်းသာ သွားဖြေတာ မြန်မာစာက ကဗျာ ၅ပုဒ် ၊ စကားပြေ ၅ပုဒ်ပဲရပါတယ်။ English စာဆိုလည်း တ၀က်လောက်ပဲသင်လို့ပြီးတယ်။ Essay , Letter ဆိုရင် တသက်လုံး ရေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ မှတ်မှတ်ရရ သချာင်္ဆိုရင် Chapter7Probability အထိပဲ သင်ခံခဲ့ရတယ်။ အဲ့နောက်ပိုင်းဘာမှမသိခဲ့ပါဘူး။ Physics နဲ့ Chemistry ကလည်း အကုန်အသင်မခံခဲ့ရဘူး။ Bio ကျတော့ အမေလိုချစ်ရတဲ့ဆရာမက အတင်းတိုက်တွန်းပြီး ကျတ်ခိုင်းလို့ ၆၇မှတ်ရခဲ့တယ်ဆိုပါတော့လေ။ အားလုံးက ကျွန်တော့် အပြစ်တွေပါပဲ။ နှစ်စကတည်းက စာတွေကို လုံးဝမလုပ်ခဲ့သလို နှစ်လယ် နဲ့ နှစ်ဆုံးမှာလည်း မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျူရှင်ပြေးခဲ့တာတွေလည်း ပါတာပေါ့လေ။
🔴တကယ်တမ်းဖြေမယ်လုပ်တော့ ကြောက်ပြီး မဖြေရဲတော့ဘဲ ရောဂါထဖြစ်တာပါပဲ။ အဖေ နဲ့အမေ လည်း ကျွန်တော့်အတွက်နဲ့ တော်တော် ဒုက္ခရောက် ခဲ့ကြရပါတယ်။ ကျူရှင်ဆိုလည်း one by one သေချာ ရှယ်ထားပေးခဲ့တာပါ။ သို့သော် ကျွန်တော်ငယ်၂တုန်းက စာနဲ့ပတ်သက်ရင် အသုံးမကျခဲ့ပါဘူး။ အသုံးမကျတာထက်စာရင် ၏ ၊ သည်မရွေး ကျတ်တူရွေးစာရွတ်သလို ရွတ်ပြီး ချရေးရတဲ့စနစ်ကို မကြိုက်တာဆိုရင်တော့ ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။
🔴ဒီလိုနဲ့ ဆယ်တန်းဖြေနေတုန်း ကျွန်တော့် အဖေ နဲ့ အမေကို ကျွန်တော် မေးတယ်။ ကျွန်တော် မေးလိုက်တာက “ဆယ်တန်းမအောင်ဘဲ ကျရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ?” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အဖေက ချက်ခြင်းဖြေတယ်။ “သားက အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးသာဖြေပါ။ ကျတာ ၊ အောင်တာက ကိစ္စမရှိဘူး။ တကယ်လို့ကျခဲ့ရင်လည်း နောက်နှစ်ပြန်ဖြေလို့ရတာပဲ” တဲ့။ သို့သော် ကျွန်တော် အဲဒီနှစ်မှာပဲ ဆယ်တစ်ကို တစ်နှစ်ထဲနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ရိုးရိုးအောင်တာကိုပဲ ကျွန်တော့်မိဘတွေက ကြံဖန်ပြီး ဂုဏ်ယူပေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ တချို့မိဘတွေ ၃ဘာသာပဲ D ထွက်လို့ ရိုက်ကြ ၊ ဆူကြ 5D ထွက်ပြီး All D မထွက်လို့ဆူရတာနဲ့ All D တော့ထွက်ပါရဲ့ အမှတ်နည်းလို့ ဖြစ်ရပြန်တယ်။
🔴တကယ်တမ်း ကလေးတစ်ယောက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော် အမြဲတမ်းပြောသလိုပဲ စာအုပ်ထဲကစာတွေကို ၏ ၊ သည် မရွေးကျတ်ပြီး စာအုပ်ထဲကို တစ်လုံးမကျန်ရေးနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးတစ်ယောက် အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာက သူဝါသနာပါတဲ့ အရာတွေ နဲ့ ဖြစ်ချင်တာ တွေ ၊ လုပ်ချင်တာတွေကို မိဘက နောက်ကနေပံပိုးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။
🔴အဲဒီလိုနဲ့ အောင်စာရင်းတွေထွက်တော့ D တစ်လုံးမှ မထွက်တဲ့ ကျွန်တော်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မတွေ့ရဲခဲ့ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့။ စိတ်ထဲမှာ ရှက်မိသလို ၀မ်းနည်း အားငယ်သလိုလိုကြီးခံစားရတယ်။ ဒါတောင် မိဘက ဘာမှမပြောပဲ ကူညီအားပေးတတ်တဲ့သူဖြစ်နေလို့ပါ။ တချို့ဆို “နင်က အသုံးမှမကျတာ ၊ သူများတွေ D ပါတယ်။ နင်က မပါဘူး။” စသည်ဖြင့် ဆူပူတတ်ကြပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ ဆရာကန်တော့ပွဲတွေလည်း ကျွန်တော် ရှက်လို့ မသွားရဲခဲ့ပါဘူး။
🔴အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော် အခုလိုဖြစ်အောင် အားပေးကူညီခဲ့သူကတော့ အဖေ နဲ့ အမေပါပဲ။ သူတို့က ပြောတယ်။ “သားလေး ဆယ်တန်း မအောင်ပဲ အောင်မြင် ချမ်းသာနေတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတယ်။ သားက ဆယ်တန်းတောင် အောင်နေပြီပဲ။ ဘာလို့ ရှက်နေရမှာလဲ ။ ဘာလို့ ၀မ်းနည်းရမှာလဲ။ အခုဆယ်တန်းအောင်ပြီဆိုမှတော့ သားလုပ်ချင်တာတွေ စပြီး လုပ်လို့ရနေပြီလေ။ သူများတွေ ကျောင်း ၅နှစ် ၊ ၆နှစ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာ သားက အဝေးသင်တက်ပြီး သားဝါသနာပါတာတွေကို လုပ်လို့ရပြီလေ” လို့ အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်။
🔴အဲဒီ အားပေးစကားတွေကြောင့်ပဲ ကျွန်တော် ဒီနေ့လို အခြေအနေကို ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် အခု အရမ်းမချမ်းသာပါဘူး။ သို့သော် အခု အသက်၃၀မပြည့်ခင်အချိန်မှာပဲ ငွေကြေးအတွက် သိပ်ပူစရာမလိုတဲ့ ဘ၀ကို ရရှိနိုင်ခဲ့ပြီ။ နောက်ပြီး မသုံး မဖြုန်းပဲနေမယ်ဆိုရင် အေးဆေး တဘ၀လုံးစာ ထိုင်စားလို့ရနိုင်တဲ့ ၀င်ငွေရှိခဲ့ပြီ။ ဒါတွေက ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့မှုနဲ့အတူ မိဘတွေရဲ့ အားပေးနှစ်သိမ့် လမ်းပြမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
🔴ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဆယ်တန်းကို အရေးမပါဘူးလို့ ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဆယ်တန်းသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအရေးပါတယ်။ သို့သော် ဆယ်တန်းက ဘ၀ကြီးတစ်ခုလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ဆိုတာ ဘ၀ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်တန်း မဖြေနိုင်တာနဲ့ပဲ ဘ၀ကြီး စုတ်ပြတ်သွားပြီလို့ ထင်နေတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ အတွေး အမြင်တွေကို ပြင်စေချင်တာပါ။ မအောင်ရင် ပြန်ဖြေပါ။ အချိန် ၁နှစ်နောက်ကျသွားတာက လွဲပြီး ဘာမှဖြစ်မသွားပါဘူး။ ရိုးရိုးအောင်ခဲ့ရင်လည်း ကျေနပ်ပါ။ ထပ်မံကြိုးစားပါ။
🔴မိဘတွေအနေဲ့ ကလေးတွေကို အတင်းဖိအားမပေးပါနဲ့။ ကလေး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် Talent နဲ့ IQ တွေက မတူညီကြပါဘူး။ တချို့က စာတော်မယ်။ တချို့က အဆိုတော်မယ်။ တချို့က အက တော်မယ်။ တချို့က ဘောလုံးကန်တာတော်မယ်။ သူတို့ တော်တာကို ကူညီပံပိုးပေးရမှာက မိဘတွေရဲ့တာဝန်ပါ။ စာကိုတော့ သူတို့ ဖတ်နိုင်သလောက်ပဲ ဖတ်ကြပစေ… ဒါမှ သူတို့သည် သူတို့ဝါသနာပါတဲ့အရာမှာ အောင်မြင်ထူးချွန်တဲ့ သူတွေဖြစ်နိုင်ကြမှာပါ။
🔴ဒါ့ကြောင့် ဆယ်တန်းမှာ ရိုးရိုး သာမာန်ပဲ အောင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုပြော ချင်တာကတော့ ဘယ်တော့မှ အားမငယ်ပါနဲ့။ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ ဘ၀ကို အရှုံးမပေးပါနဲ့။ ဆယ်တန်းဆိုတာ ဘ၀ကြီးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလေးပါပဲ။ ဘ၀မှာ ဆယ်တန်းထက် အရေးပါ တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိသလို သင့်အနေနဲ့ အပြင်လောကမှာ ကြိုးစားနိုင်ရင် ကြိုးစားသလောက်ရမယ့် အခွင့်အရေးတွေ အများကြီးရှိသေးတယ် ဆိုတာကိုလည်း သိစေချင်ပါတယ်။ ကဲ…စာတော်တော်ရှည်သွားပြီမို့ ဒီမှာပဲ နားလိုက်ပါတော့မယ်နော်…. 🙂
🔴အားလုံးပဲ အောင်မြင်တိုးတက် ကြီးပွားချမ်းသာကြပါစေနော်… 🙂
📣ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာတွေကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Like & See First လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Dream it, Believe it, Achieve it. 🙂
ဖြိုးအာကာ (Founder/Principal@Y-Max ICT Training Center)
CEO @ Y-Max Technologies Co., Ltd.
President (Technological Committee, MCPA – Bago Region)
MCSE, MCSA, MCTS, MCITP, MCP (Microsoft, USA)
CCNP, CCNA (Cisco Inc, USA)
MTCINE, MTCTCE, MTCUME, MTCRE, MTCNA (MikroTik, Latvia)
Credit – Phyo Arkar
ကျတော့်လို ကွမ်း ကြိုက် ကွမ်းစားပြီး ကုလားဆေးမွှေးတွေ နဲ့ စားတဲ့ ညီအကိုတွေအတွက်
ဗဟုသုတ လို့ ပဲ မှတ်ပေါ့ ဗျာတို့ ရယ် အထူးသဖြင့် ကျတော့်လို ကွမ်း ကြိုက် ကွမ်းစားပြီး ကုလားဆေးမွှေးတွေ နဲ့ စားတဲ့ ညီအကိုတွေအတွက်ပါ။ ကျတော်ဆေးရုံတက်တုန်း က ကျတော့် ကုတင်ရဲ့ ၂ကုတင်ကျော်က ကိုမျိုးလွင် ဆိုတဲ့ လူနာ နဲ့ ခင်သွားတဲ့အခါ …
မီးလောင်နေတဲ့ အခန်းကနေ ကယ်ထုပ်ပေးခဲ့သူ
(5.5.2018)၊ နံနက်(၉)နာရီခန့်က ရန်ကုန်မြို့၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ကျောက်တံတားရဲစခန်းဘေးကတိုက်၊ မီးလောင်ရာမှာ၊3ထပ်အမြင့် နောက်ဖေးပေါက်က နိုင်ငံခြားသူခလေးမလေးအား၊ မိမိ၏ အသက်ကို ပဓာနမထားပဲ၊ ပိုက်လုံးကို တွယ်တက်ပြီး သက်စွန့်ဆံဖျား ခဲရာခဲဆစ် ကယ်ထုပ်ခဲ့သူ မြန်မာအမျိုးသားပုံပါ၊ Facebook မှတဆင့် ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ (လူမှု့ထူးချွန်ဆု ပေးတဲ့အဖွဲ့တွေ သိကြ …
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး လေသူရဲ (သို့) မီးပုံးပျံ ဦးကျော်ရင်
ဦးကျော်ရင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး လေသူရဲ ဖြစ်ပေသည်။ တချိန်က မြန်မာတစ်ပြည်လုံးတွင် ဟိုးလေးတကျော် ထင်ရှားခဲ့၍ တစ်ဦးတည်း ပေါ်ထွန်းခဲ့ဖူးသော သူတစ်ဦး ဖြစ်ပေသည်။ မြန်မာစာမျှသာ တတ်သော ပုံဆွဲဆရာဘ၀မှ နေ၍ မီးပုံးပျံကို ကြံစည်ပြုလုပ်ပြီးလျှင် ၁၉၂၉-ခုနှစ်မှ ၁၉၃၉-ခုနှစ်အထိ (အသက် ၅၆နှစ်မှ ၆၆နှစ်အထိ) ၁၀-နှစ်အတွင်း …
လေးဖြူနဲ့ သီချင်းဆိုခွင့်ဟာ သူ့ရဲ့အိပ်မက်ပါဟု ဆိုတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်
ဆံကေသာအလှဆုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆယ်လီမမ (၉) ဦး
လူယုတ်မာကို သတ်တာ လင်းလင်းခိုင်ဆိုရင် လင်းလင်းခိုင်ကို သတ်တာကရော ဘယ်သူတွေများလဲ.. (ပန်ဆယ်လို)
သင်နေတဲ့ အိမ် (သို့) အခန်းမှာ ဒီ အချက် (၄)ချက် …
အဖေအမြန်ပြန်လာပါ.. အမေကထောင်ကျ ဆေးရုံတက်နေတဲ့လူနာသားလေးက၂နှစ်၊ လူနာရှင်အဖြစ် စောင့်တဲ့ အကိုက ၁၃ …
ကြောက်စရာကြီးနော် နွားနို့ထဲကို ဒါတွေထည့်ကြပါတယ်တဲ့
ပရိသတ်တွေကို စိန်ခေါ်မိလိုက်လို့ ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ အိစိကွေး